Nhau - SNOPE yakaita musangano wepagore wekupemberera GORE ITSVA musi wa29, JAN.
SNOPE yakaita musangano wepagore wekupemberera GORE ITSVA musi wa29, JAN.
Iri kuuya kuzororo regore idzva, SNOPE yakaita musangano wepagore kuupemberera nevashandi vese. Mutungamiri mukuru akaita pfupiso yekushanda kwegore rapfuura uye akarumbidza vashandi vakanaka. Mibairo yakasiyana siyana yakapihwa se “mubayiro wevashandi wakanakisa” “Mubairo wakakosha wemubairo” ”mubairo wakanakisa wekutengesa”… maneja mukuru akatsanangura mafambiro ebasa muna2021 mitemo.
Iyo inonakidza yerombo dhirowa yakaita iyo yese Party kupera. Iyo chorus "mangwana ichave iri nani" inokuunzira mavambo akanaka, uchitaura zvishuwo zvakanaka zvevashandi veSNOPE yeramangwana rekambani. Mai Feng Chen, director wekambani, akadhakwa nehunhu hwake hwekumhanya; Va Yu Zhou, maneja mukuru, vakatikurudzira kuyeuka makore akaomarara kare; rwiyo rwemashiripiti "mudiki apuro" rinoitwa nevakadzi vekwedu vekambani raitonyanya kufarirwa; mitambo yekudyidzana pakati pevashandi yaive nehupenyu panguva yechirongwa; Makumi mana erombo rekudhirowa zviitiko uye 19 mibairo yakasundira mamiriro emusangano wepagore kusvika padanho, uye mubairo wekupedzisira we iPhone 12 wakazopedzisira wawira mumaoko emaneja wekushambadzira Yang Zheng Pakudya kwemanheru kwegore idzva, vashandi vese vakasimudza magirazi avo kupemberera gore idzva uye vaitarisira kuti ramangwana reSNOPE richava nani.
Musangano wese wepagore wakasvika pamhedzisiro inobudirira mune inowirirana, inodziya, ineshungu uye inofara mamiriro, ichiratidza simba, rakanaka, rakabatana uye mweya unokatyamadza wevashandi. Tichitarisa kumashure ku2020, tinoita kuyedza kwakabatana, kushanda nesimba, uye kuwana pamwe chete; tichitarisira 2021, isu tine chinangwa chimwe chete, chizere nekuvimba, uye pamwe chete tinotarisira kuti ramangwana reSNOPE richava rakajeka.
Post nguva: Kukadzi-04-2021